March 2020 – Asian Harm Reduction Network (AHRN)
Congratulations to Procurement and Supply team
27/03/2020 by AHRN IT Posted in Activities, Home-Slider
AHRN COVID-19 ေရာဂါ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မွုအစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္စစ္ကိုင္းရွိ စီမံကိန္းေနရာ ၁၉ ေနရာတြင္ AHRN ၌ ၀န္ေဆာင္မွုရယူေနသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ HIV ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ေလၽွာ့ခ်ေရးပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား COVID-19 ေရာဂါျဖစ္စဥ္ကာလအတြင္း ျပတ္လပ္မွု မရွိေစရန္ AHRN၏၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕သည္ အားသြန္ခြန္စိုက္ လွုပ္ရွားေဆာင္ရြက္လၽွက္ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္မွုေကာင္း ႏွင့္အတူ တြဲဖက္ညီေသာ AHRN team အျဖစ္မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။
AHRN Procurement and Supply team in action for un-interrupted supplies of Harm Reduction supplies and medicines for AHRN clients in 19 project sites in Kachin, Shan and Sagaing, as part of AHRN COVID-19 contingency response plan. A great leadership withaharmonized team of AHRN is highly appreciated!
ART နှင့် TB ဆေးသောက်နေသူများ သိရှိရန်
24/03/2020 by AHRN IT Posted in Activities, Home-Slider
လတ်တလော ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများ အရ AHRN – Myanmar ၏ နားခိုရာ ဆေးခန်းများမှ ART ဆေးနှင့် တီဘီဆေး ထုတ်ယူနေသူများသည် ဆေးထုတ်ယူရာတွင် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ AHRN – Myanmar ၏ နားခိုရာ ဆေးခန်းများတွင် ART ဆေး နှင့် တီဘီဆေး ထုတ်ယူသောက်သုံးလျက်ရှိသော လူနာများ အနေဖြင့် ဆေးဝါး ပြတ်လပ်မှု မရှိစေရေးအတွက် ARHN – Myanmar မှ စီမံ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ လက်ရှိအချိန်မှစ၍ ART ဆေးနှင့် တီဘီဆေး သောက်သုံးနေသော လူနာများအနေဖြင့် သိလျှင်သိချင်း မိမိတို့ သက်ဆိုင်ရာ ဆေးခန်းများသို့ ဆက်သွယ်၍ ART ဆေးနှင့် တီဘီဆေး ရယူနိုင်ရန် ပန်ကြားအပ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် လူစုလူဝေး မဖြစ်ပေါ်စေရန် အတွက် ဆေးခန်းသို့ မသွားမီ သက်ဆိုင်ရာ ဆေးခန်း ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်၍ ကြိုတင် ချိန်းဆို ဆက်သွယ်ကြပါရန် ပန်ကြားအပ်ပါသည်။ AHRN တွင် ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားသူများကို ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ပေးလျက်ရှိပြီး ဝန်ထမ်းများမှလဲ အိမ်တိုင်ရာရောက် ART ဆေးနှင့် တီဘီဆေးများကို လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးနေပါသည်။
အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာ ကြုံတွေ့ရပါကလည်း သက်ဆိုင်ရာ ဆေးခန်းဖုန်းနံပါတ်သို့ ဆက်သွယ်၍ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
ဖားကန့် – ၀၉၂၅၀၀၉၆၅၆၁
လုံးခင်း – ၀၉၇၇၆၃၈၄၃၈၄
ဆိုင်းတောင် – ၀၉၄၇၀၀၁၅၅၂
ဆိုင်းတောင် (အမျိုးသမီး) – ၀၉၄၀၀၀၃၁၃၂၆
တာမခန် – ၀၉၄၅၈၅၆၈၄၁၄
ရွှေကူ – ၀၉၄၅၅၄၃၃၆၀၅
ဗန်းမော် – ၀၉၄၂၆၉၅၆၃၀၀
ဝိုင်းမော် – ၀၉၄၇၀၀၄၁၉၂
ဆယ်ဇင်း – ၀၉၄၇၀၁၁၆၃၀
ကလေး – ၀၉၂၆၀၄၆၄၉၇၂
တမူး – ၀၉၂၆၄၀၁၉၄၉၉
အင်းတော် – ၀၉၇၇၆၉၄၄၀၀၂
လားရှိုး – ၀၈၂-၂၂၀၃၉၀၇
‌လောက်ကိုင် – ၀၈၂-၇၂၀၄၉၊ ၀၉၇၇၄၃၆၆၀၄၂၊ ၀၉၆၉၁၅၉၇၀၄၃
နောင်ပိုအောင် – ၀၉၈၉၆၉၃၂၅၃၀
မိုင်းမော – ၁၈၄၆၉၄၃၆၁၅၀
AHRN-Shwegu DIC ၌ ၂၀၁၉ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်….
23/03/2020 by albert wilson Posted in Activities, Home-Slider
AHRN-Shwegu DIC ၌ ၂၀၁၉ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါအကြောင်း၊ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် နည်းလမ်းများ၊ ကာကွယ်ရေး နည်းဗျူဟာ သင်တန်း၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်
ကမ္ဘာ.ကပ်ရောဂါ ၂၀၁၉ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် နှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အတူ AHRN – Myanmar Yangon ရုံးချုပ်မှ လမ်းညွှန်မှုများအရ ၂၂.၃.၂၀၂၀ (တနင်္ဂနွေနေ.) မနက် (၁၀) နာရီ အချိန်တွင် AHRN-Shwegu DIC ၌ ၂၀၁၉ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါအကြောင်း၊ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် နည်းလမ်းများ၊ ကာကွယ်ရေး နည်းလမ်းများနှင့် ပက်သက်သော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ သင်တန်းတွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးမှူး ဒေါက်တာနိုင်မင်းစိုး မှ ဦးဆောင်၍ ကမ္ဘာ.ကပ်ရောဂါ၂၀၁၉ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါပိုး၏ ရာဇဝင်အကြောင်း၊ ရောဂါလက္ခဏာများ၊ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ၊ လက်သန်.ရှင်းစင်ကြယ်စွာဆေးနည်းအကြောင်း၊ လူနာများနှင့် ထိတွေ.ဆက်ဆံရာတွင် နှာခေါင်းစည်း စနစ်တကျ တပ်ဆင်အသုံးပြုနည်း အကြောင်း၊ လက်အိပ်စွပ်ပုံစွပ်နည်းအကြောင်းများအား မွမ်းမံသင်တန်းပို.ချခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဆေးခန်းကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ၊ ကွင်းဆင်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ နှင့် နယ်လှည့်သွေးစစ် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊ ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများမှ အဖွဲ.လိုက် မိမိတို့ကဏ္ဍအလိုက် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ကြရာတွင် ကြုံတွေ.လာနိုင်သည့် အခက်အခဲများ၊ လိုအပ်ချက်များ၊ ဖြေရှင်းနည်းများအား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုများအပေါ် စီမံချက် မန်နေဂျာ ဒေါက်တာရန်နိုင်ထွန်းမှ ဦးဆောင်၍ အကြံပြု လမ်းညွှန်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သင်တန်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေး ပွဲအား နေ.လည် ၂ နာရီ အချိန်ခန်.တွင် အောင်မြင်စွာ ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
AHRN and Best Shelter’s 3rd Regional joint-office operational in Sagaing
“Voices of the community and people who use drugs heard in Mawleik: The Timely opening of the Methadone Maintenance Treatment Center”
AHRN Indaw Team making and donating Face Shield to Indaw and Kathar General Hospital
© 2019 AHRN, Yangon, Myanmar. All rights reserved. Disclaimer